Dhaqdhaqaaqyo saaka ka socda Garoowe iyo madaxweynaha Puntland oo ku wajahan.
GAROOWE(P-TIMES) –Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar ugu maqnaa Muqdisho, Baydhabo, Nairobi iyo Imaaraadka Carabta ayaa lafilayaa inuu maanta soo gaaro magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo soo dhoweyntiisa loo magacaabay guddi gaar ah ayaa lafilayaa in loo sameeyo maamuus ballaaran iyadoona soo dhoweyntiisa ay ka qayb qaadan doonaan madaxda dowladda iyo qaybaha kala duwan ee shacabka Garoowe.
Siciid Deni ayaa maalmihii uu maqnaa qeyb ka ahaa arrimaha doorashooyinka kulamadii looga hadlayay, isagoo horey u diiday qodobadii kasoo baxay Dhuusa-Mareeb3, haddana qodobadii u dambeeyey ayaa loo ansixiyey sidii ay kutalogaleen, gaar ahaana kuwa kuwajahan arrimaha nooca doorashada.
Laakiin Madaxweynaha dadka dhaliila ayaa ku eedeynaya in uusan waxba ka qaban markii uu tagay Imaaraatka Carabta arrinta la xariirta shirkada DPWORLD ee gacanta ku heysa marsada Boosaaso oo aan ilaa hadda waxba ka qaban, sidaas oo kale taageero u raadsashada Imaaraatka ayaa loo arkaa calaamad dhaliil badan xambaarsan.
Xogaha ayaa cadeynaya in Madaxweyne Deni uu hadda garwadeen ama Dulaal sare u yahay dawladda Imaaraatka Carabta qorshaheeda ay doonayso in ay ka fushato gudaha dalka Soomaaliya, isagoo lasoo marsiin doono dhaqaalaha lagu taageerayo dadka doonaya in ay Xildhibaano noqdaan.
Ka sokow safarada arrimaha siyaasadda Federaalka ku wajahan, haddana Madaxweyne Deni ayaa lagu dhaliilayaa in uusan waxba ka qaban arrimaha gudaha, gaar ahaana marka ay joogto Sicir Bararka baahsn ee Xukuumaddiisu 4ta nooc ku sifeysay, kan mandiqadana nooc kale ku sii sheegtay.